Sheekh Mukhtaar Roobow Oo La Soo Dhigay Isbitaalka Digfeer Ee Magaalada Muqdisho Iyo Xaaladiisa Caafimaad Oo Laga Dayriay
11/06/2019(BNN) Sheekh Mukhtaar Roobow AbuMansuur ayaa la dhigay Isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho Maalmihii lasoo dhaafay, kadib markii ay Xaalad Caafimaad lasoo daristay, sida la sheegay.
Waxaa la sheegay in Abu-Mansuur uu ka xanuunsaday Kiliyaha waxa uuna Cisbitaalka ku jiray muddo 3 maalmood ah. Waxaa la dhigay qayb gaar ah oo loo diiday inta badan shaqaalaha iyo guud ahaan dadweynaha waxaana arintiisa gacanta ku haayay dhaqtar-ka ugu sarreeya Digfeer kaas oo u dhashay Turkiga.
Markuu ka soo baxay Al-Shabaab ayaa sidaan oo kale waxaa hore loo dhigay Isbitaal, waxaana sababihii uu ugu soo biiray Dowladda la sheegaa in ay qeyb ka aheyd arrintaan caafimaad.
Sidoo kale arintaan waxaa xaqiijiyay Nabadoono iyo Saraakiil kale oo ku dhow Abuu Mansuur. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka dowladda Soomaaliya oo arintaan ku saabsan.